Kitra – «Amboara rezionaly» : raraka ny ekipan’i Fianarantsoa | NewsMada
Par PhotoNews sur 28/07/2016
Nifarana, omaly tany amin’ny kianja Rabemananjara Boeny, ny andro farany amin’ny fifanintsanana, hiadiana ny amboaram-paritra, taranja baolina kitra. Nitranga ny tsy nampoizina, satria nihintsana ary mangorn-damba, ny ekipa voafantin’i Matsiatra Ambony, tao amin’ny sokajy “B”.
Resin’i Toamasina, tamin’ny isa tokana 1 noho 0. Vokatra tsy nisy nanam-po satria noheverin’ny rehetra fa tsy hahatohitra, an-dry zalahy avy any Fianarantsoa mihitsy ny tovolahin’Antsinanana. Mitarika amin’ny filaharana izany, Antananarivo, izay manana isa 4, taorian’ny fifanintsanana. Manaraka azy kosa Toamasina, amin’ny isa 3 ary farany Matsiatra Ambony, tsy manana afa-tsy isa 1.
Mahajanga kosa no voalohany, ho an’ny vondrona “A”, rehefa nandresy an’Antsiranana, tamin’ny isa 2 noho 1. Efa samy tafita daholo ireto ekipa roa ireto, fa niady laharana fotsiny sisa. Hifandona eo amin’ny manasa-dalana izany, Antananarivo sy Antsiranana ary Mahajanga hifanazava amin’i Toamasina. Fihaonana, hotanterahina ny zoma ho avy izao.